Golihii deegaanka magaalada Galkacyo oo maanta la dhaariyey.[Akhris …] – Radio Daljir
Golihii deegaanka magaalada Galkacyo oo maanta la dhaariyey.[Akhris …]
Agoosto 23, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Aug 23- Xubnihii golaha deegaanka ee degmada Galkacyo ee dhawaantaan la soo xulay ayaa maanta si rasmi ah loogu dhaariyey xilalka loo dhiibay ee xildhibaanimada golaha shacabka ee magaalada Galkacyo.
Mudanayaasha golaha deegaanka ee maanta la dhaariyey ayaa tiradoodu gaaraysaa illaa 28 xubnood oo ka mid ah 31-da xubnood ee ay ka kooban-yiin golaha shacabka ee magaalada Galkacyo, waxaana tirada dhimman lagu tilmaamay in dib loo dhaarin doono.
Tirada golaha shacabka ee magaalada Galkacyo ayaa horay loo qorsheeyey tiradoodu in ay noqoto 27 xubood oo 5 kamid ahi ay haweenyihiin sida ku cad xeerka golayaasha deegaanka ee magaalooyinka waaweyn ee dawladda Puntlaand, waxaana haatan tiradaasi badalay kadib markii beeluhu ka soo tageen gabdhihii loo qorsheeyey in ay ka mid noqdaan golaha oo boosaaskoodii ay rag ku badaleen.
Arrintaasi ka tagidda gabdhihii golaha deegaanku waxaa ay dhalisay in m/weynuhu soo saaro wareegto cusub oo ogalaanaysa in 4 gabdhood oo cusub lagu soo daro golaha, kuwaasi oo ku imaanaya magaca beesha haweenka.
Xafladda lagu dhaarinayey xubnaha cusub ee golaha deegaanka ayaa ku sugnaa mas?uuliyiin ka tirsan dawladda Puntland oo uu ka mid yahay guddoonka sare maxkamadda gobolka Mudug, guddigii ansixinta golaha deegaanka, iyo marti sharf kale oo aad u tiro badan kuwaasi oo hlkaasi u tagay si ay goob joog uga noqdaan dhaarinta golaha cusub.
Guddoomiye kuxigeenka guddiga ansixinta golaha shacabka Marwo Caasho Geelle Diiriye isla markaana ah wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska, oo halkaasi ka jeedisay hadal dheer oo dhinacyo badan taabanayey ayaa ku dheeraatay habkii ay ku soo xusheen golahaan cusub oo ay tilmaantay in uu ahaa hab eex-laa?an ah.
Maanta berri ayaa lagu wadaa xubnaha cusub in loo qabto taba-bar ku aaddan shaqooyinka loo xilsaaray iyo waajibaadkooda, waxaana maalinta ku xigta ay ku jiri doonaan nasniin iyo in ay bilaabaan ololohooda ciddii murashaxiin ah ee doonaysay in ay isku soo taagaan jagooyin guddoomiyaha iyo kuxigeenkiisa.
27-ka bisha waxaa si rasmi ah loo dooran doonaa guddoomiyaha iyo kuxigeenkiisa iyo guddiga joogtada ah ee golaha, waxaana isla maalintaasi lagu wadaa in ay si rasmi ah ula wareegaan maamulka degmada.
Wadahadaladii u socday Puntland & dawlada Somaliya oo u muuqda in heshiis laga gaaray. [Akhris …]